Maitiro ekudzikisira kubva iOS 9 kuenda iOS 8.4.1 | IPhone nhau
Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9 kuenda kuIOS 8.4.1 ine OdysseusOTA 2.0
Isu tangova nenhau dzakakosha kwazvo kunharaunda yeJailbreak. Sevazhinji venyu munoziva, Apple yakamira kusaina iOS 8.4.1 pamaseva ayo ekusimbisa kwenguva yakati, saka zvaive zvisingaite kudzikisira kubva kuIOS 9 kuenda kuIOS 8.4.1. Naizvozvo, dai iwe wanga uri paIOS 9 uye foni yako yanga isingaite sezvayaifanira, kana iwe hausi kufara neyatsva vhezheni yeIOS chero chikonzero, wanga usina sarudzo kunze kwekungobatirira. Nekudaro, dambudziko iri rasvika kumagumo nekutenda kuna OdysseusOTA mune yayo vhezheni 2.0, ikozvino tinogona kudzokera kumashure kubva kuIOS 9 / 9.0.2 kune yazvino vhezheni yeIOS 8, iOS vhezheni 8.4.1.
OdysseusOTA mune yayo yapfuura vhezheni yakatibvumidza kuti tidzokere kubva iOS 8 kana iOS 7 kune akanakisa iOS anoshanda system kusvika ikozvino, vhezheni 6.1.3, pasina chikonzero chekuti SHSH ichengetwe. Nguva dzachinja, uye isu tiri kufara kwazvo kuti iyi vhezheni nyowani inoenderana pakati peIOS 8 neIOS 9, kune vazhinji vari kuzodzorera chero chikonzero, rusununguko ndicho chikonzero cheJailbreak, ndosaka ichisimudza mukana we kudzikisira muchirongwa chekushandisa.
Nehurombo izvi hazvigoneke pamidziyo yese. Iyo iPhones inoenderana neOdysseusOTA ndiyo iyo iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s uye iPhone 4, pamwe neiyo iPad 2 uye iPad 3. Tine urombo chaizvo kana iwe uine mudziyo wakakwira kupfuura aya uye iwe unoda kudzikisira, asi hazvigoneke. Nekudaro, hazvinyatsonzwisisike kuti mumwe munhu ane chishandiso che iPhone 5s zvichienda mberi haana kuita kwakanaka neIOS 9. Ini zvakare ndinotora mukana wekurangarira kuti iOS 9.1 inovimbisa zvakawanda, zvirinani muma betas ayo aripano yakanyatsogadzikana. uye ine simba system.
Zvirokwazvo vhidhiyo yatinayo ndeyekufananidzira, isu tinongofanirwa kuteedzera mirairo iyo yatinowana mu "Readme" faira nhanho nhanho senge muvhidhiyo, ivo vakaparadzaniswa uye vakanyorwa mufaira. Zvakare, inowirirana neLinux uye Mac OS. Usakanganwa kuti zvakakosha kuti titore iyo iOS vhezheni yatinozoisa, iOS 8.4.1 mu .psw, nekuti izvi isu tichaenda kune webhusaiti ye GetiOS uye isu tichasarudza iOS 8.4.1 uye neyedu kifaa. Pakupedzisira Ichi chinongedzo une chishandiso chiripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9 kuenda kuIOS 8.4.1 ine OdysseusOTA 2.0
Ndine mubvunzo wakanaka: ndine iyo iPad 3 ine ios 8.4 (izvo zvakashata zvisirizvo). Ini ndinogona neichi chishandiso kudzikisira kubva kuios 8.4 kusvika kuIos 7 isina SHSH, kana ios 6?
Zvinogona kundinyaradza zvakanyanya
Xavi akupindura chimwe chinhu nezvekomendi yako… Ndine iyo iPad muna 9.0.2 uye ndichaenda kuidzikisa kusvika 8.4 uye ndinoda kuziva kana ndichigona kuikanda kuIOS 6….
Uye kubva kuIOS 9 inogona kupfuudzwa kune iOS 7?
Ndo izvo zvandiri kuda kuziva, kana zvichibvira kuenda kubva ios 9 kusvika ios 7, kana kunyangwe ios 6.
Izvo ndezve mac chete uye linux? hapana vhezheni ye windows?
Yordany Castillo akadaro
shamwari iwe haugone nemamwe mavhezheni chete neiyo inoratidza kubvira probe yekukopa kune ios 7 uye haishande uye parizvino inoshanda chete kune mac uye linux ivo vari kushanda pane imwe ye windows
Pindura Yordany Castillo
Ndine iOS 9.1 pane iPhone 5, inogona kudzikisirwa kuIOS 8.4.1?
Pindura kuna Dayron
haugone kushamwari, iwe unogona chete kusvika kunguva 9.0.2.
Pindura kune esteban iphone
Oscar iPhone 5c akadaro
Mhoro, zvinoita here kudzikisa iyo iPhone kuenda ku9.0? Negadziriro iyi nyowani? Kubva pane zvandinoona inofanirwa kuve paMac Yosemite! Ndatenda
Pindura kuna Oscar iPhone 5c
Ndingaite sei kuisa linux uye kudzikisira? 🙁 kana ichazoburitsirwa windows?
Chishandiso ichi chingovandudzwa kutsigira ese iphone 5 mamodheru, ivo vari kushanda kutsigira ma4 uye ipad 2 ne3.
Esteban, ndine iyo iPad 3 uye panguva ino chinhu choga chandingaite kuitora kubva iOS kusvika 9.0.2 kusvika 8.4.1?
Unoziva here kana ini ndichikwanisa kuitsvaga kuIOS 6 nechishandiso chimwe chete?
Kana kana paine peji rekutevera iwo ekuvandudzwa echishandiso ...?
Apple TV 3 inogamuchira matatu matsva matsva kubva nhasi
Guitar Hero Live inosvika kuApp Store, asi isati iri muSpain